Enwere Innovation Ebe a na Silicon Prairie | Martech Zone
Thursday, May 6, 2010 Satọde, Satọdee 19, 2015 Bọọlụ Lorraine
Anọ m ụbọchị dị ịtụnanya dịka otu n'ime ndị ọka ikpe maka onyinye onyinye Mira kwa afọ. Ezie na m enweghị ike ịgwa gị onye meriri (ị ga-aga Ọrụ Mira na Mee 15th). M nwere ike ịgwa gị na e nwere ụfọdụ ịrịba ọhụrụ na-eme ebe a na Indiana.
Abụ m onye ọka ikpe na ngalaba abụọ Social Media na Corporate IT. Nke ahụ bụ ọdịiche dị iche na-esite na ndị na-azụ ahịa nimble na ndị na-emepụta ihe dị n'ime ọdịnalaòtù. Nkwubi okwu m - Innovation dị ebe niile na Silicon Prairie dị ka ụlọ ọrụ mpaghara na-achọta ụzọ okike iji teknụzụ na ndị ahịa, atụmanya na ndị ọrụ.
Nke a bụ naanị ndepụta nke ụlọ ọrụ dị jụụ m nwere ohere izute izu gara aga:
Anacore - Meziwanye ozi onye ọrịa na ngwaahịa Triage ha
Kpọmkwem Ngwaọrụ - Nọgidere na-achọta ụzọ ọhụrụ ịkesa ozi na ndị ahịa ha na ndị ọrụ ha na-eji 3sixty ha netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta.
Imavex - Site na vidio ọhụụ ha nwere ike ịnyefe ọdịnaya na enweghị ngwa ọ bụla na ekwentị mkpanaaka
Ebe E Si Nweta Ọgbakọ - Agbanyela sistemụ CRM na Workflow dị ka ihe ha nwere ike ịre ndị ahịa akwụmụgwọ ndị ọzọ, na-emefu ego iji nweta mmemme na-eweta ego.
Ugwu-Rom - Gbanwee omume ogologo oge na njedebe, ha agbanweela usoro ha maka nyocha na ịkesa akụ maka ọrụ ọhụụ, na - akpata ego a na - eduzi na mmemme ga - enweta mbido kachasị elu!
Enwere m olileanya na ị ga-esonyere m na-eme mmemme nke ndị a na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ukwuu nke Indiana na Mira Awards.
Tags: anacorekpachaara anyaunion credit unionugwu-romimavexIndiaokirikiri siliconndagwurugwu silicorn
Mee 6, 2010 na 4: 38 PM
Biko mba no .no more Silicon Prairie nonsense !!! Ọ bụrụ na anyị ga-ekwu, sụpee ya ọfụma.
Mee 6, 2010 na 4: 48 PM
James, nwute na ịchọghị Silicon Prairie. M n'ezie n'ezie na-amasị ya ka mma mgbe ahụ Silicoren Vallley. Ma thx maka ndetu na typo. Enweghị m ike ịkọwapụta ọnụ ahịa, ma ọ gaghị aka mma mgbe m na-anwa ịpị ngwa ngwa iji pụọ ma nwee anwụ na-acha na Silicon Prairie
Mee 6, 2010 na 9: 34 PM
Imavex ghọrọ n'ezie nnukwu nzukọ. Steve na Ryan na ndị otu ahụ emeela ihe dịtụ obere - dị ka ịme vidiyo ndị ahịa na-ahaziri maka ndị ahịa ha ma tinye ya na dashboard ha. Ọzọkwa, a kpọrọ ha otu n'ime ụlọ ọrụ ọchụchọ kachasị ụgwọ na mba ahụ. Akwa ndị nọ ebe ahụ.
Mee 6, 2010 na 9: 43 PM
Echeghị m na ọ bụ ihe nzuzu ma ọlị, James. Echere m na Silicon Prairie ma ọ bụ Silicorn Valley na-adọrọ uche ndị mmadụ. Onye ọ bụla na-akọ "Silicon" na ngwanrọ na ndị na mpụga Indiana enweela ihe oyiyi nke mpaghara anyị nke okwu ndị a jidere.
Bụ "Silicon Valley" bụ ihe nzuzu? Bụ “Nnukwu Apple”? “Obodo Nmehie”? "Emerald City"?
Ọ dị mma karịa “Circle City” ma ọ bụ “Naptown”! Itinye n'ọrụ okwu ọchị, ma na-enye ekele dịka nke a nwere ike ịbụ naanị ihe anyị kwesịrị iji dọta uche ndị mmadụ.